Famindram-po avy amin’ny Filoha : Nahazo fanalefahan-tsazy 2 hatramin’ny 12 volana ireo voafonja -
AccueilSongandinaFamindram-po avy amin’ny Filoha : Nahazo fanalefahan-tsazy 2 hatramin’ny 12 volana ireo voafonja
Famindram-po avy amin’ny Filoha : Nahazo fanalefahan-tsazy 2 hatramin’ny 12 volana ireo voafonja
09/01/2018 admintriatra Songandina 0
Taorian’ ny famoahan’ny filoham-pirenena ny didim-panjakana mikasika ny fanalefahan-tsazy ho an’ireo voafonja, dia andalana izao ny fitsirihana ireo antontan-taratasy maro isan-karazany mahakasika ireo voafonja. Tamin’ity taona 2018 ity dia nahazo fanalefahan-tsazy 2 hatramin’ny 12 volana ireo voafonja. Marihina moa fa ireo olona tsy nandatsa-dra sy tsy voarohirohy amina heloka be vava no mahazo izany famindram-po avy amin’ny Filoham-pirenena izany.
Ampidirina anatin’ ny antontan-taratasin’ireo voafonja avokoa ireny fanalefahan-tsazy ireny, ka aorian’ izay no hikajiana ny ambin’ny sazy izay tokony mbola no taperin’ny voafonja iray. Noho izany rahampitso mihitsy vao ho fantatra ny antontan’isa ho an’ireo izay mahafeno ny fepetra. Araka ny kajikajy tsotsotra kosa raha ny nambaran’ny mpitsara iray miasa eo anivon’ny minisiteran’ ny Fitsarana dia mety hatratra hatrany amin’ ny telo arivo any ho any ireo izay hisitraka ity fanalefahan-tsazy ity, vitsy kosa anefa hoy ity loharanom-baovao ity no mety hoe hivoaka avy hatrany.
Isan’ny nandrasan’ny maro ihany koa ny momba ny fisondrotan-karama ho an’ny mpiasam-panjakana, ka fantatra fa efa akaiky ny hivoahan’io dosie io.
Berthin Randriamihaingo. Teny amin’ny tontolon’ny rallye no tena nahafantaran’ny maro azy. Amin’izao fotoana, loholon’i Madagasikara i Berthin Randriamihaingo ary manohana ny fitondrana amin’ny alalan’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM). Milaza sy mizara ny ...Tohiny